A na-enye Costa Rica maka ụbọchị 300 naanị site na ume ọhụrụ emere Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
A na-enye Costa Rica maka ụbọchị 300 naanị site na ume ọhụrụ
Costa Rica emezuola karịa ụbọchị 300 nke sistemu eletriki ya na-arụ ọrụ nanị site na ike imegharị, karịsịa ike hydraulic.
Rlọ ọrụ eletrik nke Costa Rican (ICE) na nkwupụta gosipụtara na akara ụbọchị 300 ruru na-enweghị mkpa ọ bụla iji rụọ ọrụ osisi ọkụ ọkụ ọkụ.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ akara akụkọ ihe mere eme maka obodo a ebe ha nwere ihe omume ndị dị ka ndị a, otu na 2015 na-eru ụbọchị 299 na na 2016 na-eru 271 ụbọchị na 100% ume ọhụrụ.
Dabere na ice:
"Onu ogugu 2017 nwere ike ibuwanye n'ime izu ndi foduru rue na njedebe nke afo"
Ka ọ dị afọ a (2018) obodo enweelarị a ọkụ eletrik nke 99,62% nke isi mmalite 5 nke nrụpụta ike ọkụDị ka data sitere na Energylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ike Ike Mba na nke ICE zoro, ndị a nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu kemgbe 1987.
Maka afọ 2016 lee onyonyo dị n’okpuru.
Ice kwuru, sị:
“N’afọ 2017, ọkụ eletrik sitere na 78,26% nke osisi hydro, 10,29% nke ikuku, 10,23% nke ike geothermal (ugwu mgbawa) na 0,84% ​​nke biomass na anyanwụ.
Nke fọdụrụ 0,38% si thermal osisi kwadoro site na hydrocarbons ”.
Carlos Manuel Obregon, Onye isi oche nke ICE na-akọwa na:
“Njikarịcha matrik ahụ enyerela anyị aka iji nnweta mmiri dị elu. Iwu ọdọ mmiri na-enye anyị nkwa iji bulie ojiji nke isi iyi na-agbanwe agbanwe, ọkachasị mmiri na ifufe, na n'otu oge ahụ, onyinye nke ike ikuku ọkụ. ”
N'ezie, a na-eme atụmatụ 2017 dị ka afọ na ụba ikuku ike mmepụta nke akụkọ ihe mere eme nke Costa Rica, agụta 1.014,82 GW / h kemgbe Jenụwarị, site n'ihe dị ka osisi ifufe 16 arụnyere na mba ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » A na-enye Costa Rica maka ụbọchị 300 naanị site na ume ọhụrụ
Ike mmeghari ohuru bu 17,3% nke ike oriri ikpeazụ
Nnukwu ọganihu ndị ga-abịa iji kwalite ume ọhụrụ